विश्वमा फलेका यी फलफुल र तरकारी,जसले विश्व रेकर्ड बनाए « Image Khabar
५ पुष २०७८, सोमबार ११:५४
१. सखरखण्ड : सखरखण्डलाई शरीरमा उर्जाको स्रोत मानिन्छ । यसलाई कन्दमूलका रुपमा पनि हेरिन्छ जाडोमा कन्दमूल खाँदा शरीरमा ताप उत्पन्न हुन्न भन्ने गरिन्छ । यसमा क्यालोरीको मात्रा पनि धेरै हुन्छ । यो प्राय विश्वका धेरै देशमा फल्छ । हामीले धेरै ठुलो सखरखण्ड देखेका छैनौ । तर लेवनानका एक किसानले सबैलाई अचम्मित पार्ने खालको सखरखण्ड फलाएका छन् । उनले फलाएको एउटै सखरखण्ड झण्डै साढे ११ किलोको रहेको छ । अरु सखरखण्डका तुलनामा त्यो एउटा मात्रै यस्तो सखरखण्ड थियो जुन सबैभन्दा ठुलो र अचम्मीत पार्ने खालको थियो । किसान भन्छन् त्यो सखरखण्ड न हाइब्रेट हो न त्यसमा छुट्टै मल प्रयोग गरिएको हो । यो सखरखण्ड विश्व रेकर्डमा आज सम्मकै सबैभन्दा ठुलो सखरखण्ड हो ।
३. बन्दाकोभी : अमेरीकाको अलस्का निवासी जोन इभन्स एक जादुगर हुन्,उनले आफ्नो जादुले संसारलाई चकित त बनाएका छन् नै उनले उत्पादन गरेको बन्दाकोपीले पनि विश्व रेकर्ड कायम गरेको छ । उनाले आफ्नो बारीमा ३४ किलो को बन्दाकोभी फलाएर विश्व रेकर्ड राखेका हुन् ।
५. गाजर : गाजर पनि हाम्रो शरीरका लागि यस्तो उपयोगी चिज हो जसलाई तरकारी र फलफुल दुबैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । गाजरमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर हुने हुँदा यसले तौल कम गर्न मद्दत गर्दछ । बेलायतका पिटर लाजब्रोकले एउटै गाजर साढे १० किलोसम्म फलाएर विश्व रेकर्ड राखेका छन् ।
७.प्याज : प्याज हरेक भान्छामा हरेक दिन प्रयोग हुने कुरा हो । प्याजलाई सलादको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यसका पनि विभिन्न फाइदा छन् । बेलायतका एक किसानले आफ्नो खेतमा साढे ८ लिोको प्याज फलाएका छन् । जसबाट उनले विश्व रेकर्ड राखेका हुन् ।
८. कागती : कागती एक उपयोगी फल हो । यसमा भिटामीन सी प्रसस्त रुपमा पाइन्छ । यसले स्वास्थ्यलाई फाइदा पुयाउछ । इजरायलका एक किसानले साढे ५ किलोसम्मको एउटा कागती फलाएका छन् । यो अहिले सम्मकै ठूलो कागती हो । जसले विश्व रेकर्ड राखेको छ ।